Oyi Agba Agba Spraying Road akara Machine Manufacturers | China Cold Agba spraying Road akara Machine Factory & Suppliers
—— Ihe Oyi Na-agba Agba Spraying Marking Machine ——
LXD-9L Aka Push High Pressure Airless Cold Paint Road Marking Machine
Anyị bụ ndị China kasị ukwuu ọkachamara emeputa na factory nke aka inupụ elu nsogbu airless oyi agba ụzọ marking igwe. LXD-9L bụ igwe kachasị n'etiti igwe akara ngosi ụzọ agba agba, ọsọ ọsọ ya nwere ike iru 13kh / h,
LXD-6L Aka Push High Pressure Airless Cold Paint Road Marking Machine
Anyị bụ ndị China kasị ukwuu ọkachamara emeputa na factory nke aka inupụ elu nsogbu airless oyi agba ụzọ marking igwe. Ọ bụ a pụrụ iche na akụrụngwa maka nkịtị okpomọkụ agba ewu. O kwesịrị ekwesị maka okporo ụzọ, okporo ụzọ, ebe a na-adọba ụgbọala, ọdụ ụgbọ elu, ọdụ. Ọ nwere ike akara akara, akara akara, eriri, na-agafe zebra, akụ, wdg.
LXD-2L Electric Cold Agba Road akara Machine
Anyị bụ ndị China kasị ukwuu ọkachamara emeputa na ụlọ ọrụ nke electric oyi agba ụzọ marking igwe. Ọ nwere ike ịrụ ọrụ 4 awa na otu ụgwọ zuru oke, dị mfe ịrụ ọrụ ma debe ya. Enwere ike iji ya n'ọtụtụ ebe, dịka bọọlụ bọọlụ, ụlọ akwụkwọ, obodo, ebe a na-adọba ụgbọala, ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ụlọ akwụkwọ ịnya ụgbọ ala, ọdụ gas, wdg.
Anyị bụ ndị China 's kasị ọkachamara emeputa na factory nke elu nsogbu airless oyi agba ịgba ụzọ marking igwe. Ọ bụ akụrụngwa pụrụ iche maka nrụpụta agba agba ọkụ. Okwesiri maka uzo, okporo ụzọ, ebe a na-adọba ụgbọala, ọdụ ụgbọ elu, ọdụ.
LXD 18L-2 Truck Mounted Double Silinda Ugboro abụọ mgbapụta Cold Paint Road Marking Machine
Anyị bụ ndị China kasị ọkachamara ọkachamara na ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke gwongworo n'ịnyịnya na abụọ cylinder abụọ mgbapụta oyi agba ụzọ akara igwe. Ọ e mere maka nnukwu-ọnụ ọgụgụ ụzọ, karịsịa emetụta obodo ụzọ, ọdụ ụgbọ elu na awara awara ụzọ wdg Ọ nwere ike akara n'ezie akara, dotted akara, abụọ odo akara wdg Ọ na-onwem na abụọ ịgba egbe na abụọ agba ịwụ, nwekwara ike ịgbakwunye agbakwunyere ntuziaka ịgba egbe, iji mee ka akara akara dị na agba dị iche n'otu oge.
LXD-D168 Na-akwọ ụgbọala Typedị Typegbọ Mmiri Na-agba Ọkụ Roadgba Ihe Mgbapụta Ngwaọrụ
Anyị bụ ndị China kasị ukwuu ọkachamara emeputa na ụlọ ọrụ nke na-akwọ ụgbọala ụdị oyi agba ịgba ụzọ marking igwe. Glass chaplet dispenser: Pneumatic dispenser (arụ ọrụ mgbali mgbanwe). Hydraulic agitator: agba agba ọ bụla nwere Hydraulic agitator.